Sajhasabal.com | Homeमातृभुमिमा मेरो सानो सोंच - रण बहादुर चन्द
(लेखक रण बहादुर चन्द ०२१ साल श्रावण ३० गते शुक्रवार रोपनिलेक, बागकोट, मेलौली न.पा. -३ बैतडी जिल्लामा जन्मेको हुन् । उनले त्रिभुवन युनिभर्सिटि बाट एम ए तथा हाल मेवार युनिभर्सिटि राजस्थान बाट हाल PHD गरि रहेको छन् । चन्द नेपाल प्रहरीका पूर्व ए आइ जी पी तथा बरिष्ट समाजसेवी समेत हुन । उनले हाल विभिन्न विधामा निरन्तर कलम चलाउदै आएका छन् ।)
उहाँको मातृभुमिमा मेरो सानो सोंच यस प्रकार छ :
- प्रकृतिमा रहेका विभिन्न तत्वहरुको समिश्रणबाट अदृश्य शक्तिको संयोजनमा मानव शरीरको रचना भएको हुन्छ । प्राणीमात्रमा अत्माको रुपमा भगवानको अंश रहेको सम्पुर्ण मानव जातीको विश्वास छ ।मानव जातिका लागि यो कर्मप्रधान संसार हो, जहाँ कर्म गरे पछि केहि न केहि फल अवश्य पाईन्छ । ईश्वरको चाहना हो कि मानवले पृथ्वी लोकमा भगवानको चाहना बमोजिम कार्य गर्दै जाओस्, जसबाट ईश्वर आफ्नो कल्पना अनुसारको परिक्षणमा सफल होस् ।त्यसैले भगवानले आफ्नो सर्वोत्कृष्‍ठ कर्मयोगी अवतार मानव को श्रृष्‍टि गरेको होला । भनिन्छ, स्वर्गमा आफ्नो कर्मबाट आर्जित फलको भोग गर्ने मात्र सुविधा छ । कर्म गर्ने अवसर पृथ्वी लोकमा मात्रै छ त्यो पनि मानव जातीले मात्र परिवर्तनशील कार्य गर्न सक्छ ।त्यसैले मानव जातीलाई सर्बोत्कृष्ठ प्राणीका रुपमा लिईन्छ । जीव शास्त्रीहरुले मानव जीवनका बारेमा जे जति बिज्ञान र सिद्धान्त प्रतिपादित गरे पनि उठेका टिप्पणीहरुको बैज्ञानिक जवाफ दिन सकेका छैनन । अहिले पनि धर्म, संस्कृति र जन विश्वास छ कि हाम्रो जीवन ईश्वरको योजनावद्ध कार्यको फल हो । मानिसको शरीर, आत्मा, हृदय र मष्तिष्क बारेमा हाम्रा धर्म शास्र्तहरुमा परिकल्पना यस्तो गरिएको छ ।
संसारका प्राणीहरु सबैको जीवनकाल छ । आहार, निन्द्रा, भय र मैथुन प्राणी सबैमा हुन्छ । ईशवर र प्रकृतिले मानिसलाई विवेक र संचार क्षमता युक्त बनाई अरु प्राणी भन्दा फरक गरेको छ । मानव भएर हामीले यो फरक के हो ? र केका लागि हो भनेर बुझ्नै पर्छ । मानिसको मस्तिष्क अरु प्राणीको भन्दा बढी विष्लेशण गर्न सक्छ, बढी बिवेक छ, उत्कृष्ठ संचार क्षमता छ, यो यथार्थपरक तर्क हामीले गर्न सक्छौं । तर के यस फरकबाट हामीले हाम्रो जीवन अरु प्राणीको भन्दा फरक बनाउन सकेका छौं ? वा हामी पनि अरु प्राणीले जस्तै खाने, डुल्ने, आराम गर्ने, बच्चा जन्माउने, घर बनाउने र अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोहमा मात्रै सिमित राखी समय व्यतित गरि रहेका छौं ? राम्रो काम हर्नकै लागि भगवानले हाम्रो आत्मालाई मानिसको चोलामा जन्माएको छ । भगवानको चाहना अनुरुप पनि यस धर्तीमा राम्रा कामहरु गर्न हामीले मानवीय क्षमताको सही सदुपयोग गर्नै पर्दछ । तर जीवनको रचना मात्र अति विशिष्‍ट होईन, यसलाई कर्म द्धारा हामीले अति विशिष्‍ट बनाउनु पर्दछ । हामीमा कर्म गर्ने क्षमता निहित गरिएको छ । हामी कर्मयोगी प्राणी हौं । हामीले ईश्वरको चाहनालाई साकार पार्न मानव जीवनका लागि निर्देशित कर्महरु गर्नु पर्दछ । ईश्वरको ईच्छा पनि यही हो, जुन हाम्रो कर्तव्य हो । यस लोकमा सत्य कामहरु भईरहेका छन । कर्म गरे सो अनुसारको फल पाईन्छ नगरे सो अनुसारको फल पाईन्छ ।
अहिले शंसोधनमा रहेको लागु औंषध ऐन २०३३ संसोधनमा आएपछि सो ऐन र नियमावलिमा हाल देखा परेका समस्याहरु - व्यूरोको पुनसंरचना गर्नु पर्ने अवस्था, लागू औषध नियन्त्रण व्यूरोलाई अपूर्ति नियन्त्रण र चेतनामूलक कार्यक्रम समेत गर्न पाउने व्यवस्था,लागू औषध नियन्त्रण व्यूरोलाई आवस्यक अलग्गै बजेट नछुट्टीने अवस्था, लागु औषध रोकथाम र नियन्त्रणको संरचनाको स्वरुपमा व्यापकता ल्याउनु पर्ने, औषधी कम्पनीहरुले ल्याउने सहायक केमिकल –प्रिकर्सर, लागू औषधको कारोवारमा प्रयोग भएको अवस्था देखिएकोले यसको प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था,लागु औषध बारेको आवश्यक जानकारी दिने व्यक्तीलाई जानकारिको सत्यता प्रमाणित हुना साथ पुरष्कार दिन नसकेको अवस्था, राज्यले प्रत्येक क्षेत्रमा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न नसकेको अवस्था,पुनर्स्थापना केन्द्रहरुको अनुगमन र नियमन प्रभावकारीरुपमा गर्न नसकिएको अवस्थाहरु लाई संबोधन गरिनु पर्नेअनिबार्यता छ। सबैलाई यस बिषयमा बढी जागरुक र दृढ संकल्पित बनाउन शंसोधन हुने ऐन नियमावलीमा- नेपालबाट वाहिर जानु पर्दा, सवारी चालक अनुमति पत्र लिंदा वा रिन्यू गर्दा, हातहतियारको ईजाजत पत्र लिंदा वा रिन्यू गर्दा,कुनै सार्वजानिक पदमा वहाल रहँदा वा सरकारी तवरमा जनप्रतिनिधिको रुपमा रहने हरेक व्यक्तिलाई पनि मेडिकल रिपोर्टसंगसंगै नार्कोटिक टेस्ट रिपोर्टपनि लिनु पर्ने अनिवार्यता भएमा लागु औषध नियन्त्रणको अभियानले बढि महत्व पाउँनेछ।
यसका साथै हरेक अभिभावक, सचेत नागरिकहरुले पनि अत्मालाई साक्षी राखी आ-आफ्‍नो ठाँउबाट लागु औषधको बिरुद्धमा काम गर्नै पर्ने हुन्छ ।त्यस्तै विद्यालय, कलेज, होस्‍टेलहरुले ती सस्थाहरुमा विद्यार्थीहरुलाई त्यस्ता कुलतमा लाग्ने रतिभर पनि संभावना नरहेको र आफुहरु लागु औषधको बिरुद्धमा छौ भन्ने कुराको उदाहरण सहित प्रस्तुत गर्न सक्‍नु पर्दछ ।सम्पुर्ण सचेत देशवासीहरुले लागु औषध मुक्त समाज स्थापनाको कार्य आफ्नो मानव जीवनको कर्तव्य हो भनि सहकार्यमा जुट्ने हो भने मात्र स्वस्थ्य र सुन्दर समाजको कल्पना साकार हुनेछ । हरेकले आफ्नो मानव जीवनमा एउटा उल्लेखनीय उपलब्धि हाँसिल गर्ने छन । हरेक व्यक्तिको जीवनको अमुल्य उपलव्धि समाज र राष्ट्रले पाउनेछ । साथसाथै ईश्वर, माता–पिता, प्रकृति, गुरु र मातृभूमी प्रतिका जिम्मेवारीहरु तर्फ पनि हामी अग्रसर रहेको मानिनेछौं ।